किन आवश्यक छ हात्ती संरक्षण ? : Chitwan Tourism
» Articles and Readings » किन आवश्यक छ हात्ती संरक्षण ?
श्रावण २७, २०७५ (August, 12 2018), Source: Kantipur
आज विश्व हात्ती दिवस । हात्तीको महत्व, संरक्षण र रक्षा गर्ने उद्देश्यले यो दिवस सन् २०१२ देखि मनाउन थालिएको हो ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको हात्ती प्रजनन केन्द्रका हात्ती।
यिनै यस्ता विशेषताका कारण हात्तीलाई छाता प्रजाति(किस्टोन स्पेसिस)को रुपमा लिइन्छ। यसकारण हात्तीको संरक्षण आवश्यक छ।